Soo dejisan Playkey 1.2.25.38649 – Vessoft
Games, Streaming video
Soo dejisan Playkey
Playkey – adeegga ciyaaraha daruur Radidiyaha kulan oo caan ah oo internet-ka. Software wuxuu taageeraa kulan badan oo ka soo saarayaasha ugu horeeysa ee la bilaabay ku servers fog iyo baahiyey in user ee foomka of il video. Playkey u saamaxaaya in ay ciyaaraha u ciyaaraan qalab kasta oo ku xiran internetka iyada oo browser ama software kale macmiilka. Playkey bixisaa xawaare sare kala iibsiga ee hoorto gooldhalinta iyo tayada ugu weyn image. Software nayaa helaan in ay kulan kala duwan oo ka soo baahida loo qabo in ay soo iibsadaan qalabka ciyaareed gaar ah oo taageero ka helaya kulan la Xamuulka badan oo ku saabsan nidaamka u diidaa dadka isticmaala. Sidoo kale intaadan gadan kulan ee Playkey kuu ogolaanayaa inaad si ay u tijaabiso inta lagu jiro xilliga qaar ka mid ah wakhtiga.
Xawaaraha kala iibsiga Sare ee gooldhalinta qulqulaya
Taageerada kulan ka horreeya
Shuruudaha Low ee goobaha nidaamka
Radidiyaha kulan ee qalabka kala duwan
Comments on Playkey:
Playkey Software la xiriira:
Games aalad waxaa loogu talagalay in reserved hotkeys ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ula socdaan, keyboard ku keyboard ah, dhaqdhaqaaqa of mouse iyo shuqulkii aaladaha kale ee gacanta.
English, Українська, 中文, Русский... GameRanger 1.0.0.0
Games Madal Kulankii in emulates shabakad deegaanka si ay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay in la abuuro qolka caado u ciyaaro si wadajir ah saaxiibada.
English, Français, Español, Deutsch... Modio 5.301
Kadib Mid ka mid ah daalacashada ugu dhaqsiyaha badan ula engine awood leh. Software ka kooban yahay sifooyinka gaarka ah ee joogo si qarsoodi ah oo ammaan ah ee internet-ka.
Editor Audio qalab The xirfadeed si ay u abuuraan iyo qaso files audio. software The soo jeedinaya fursadaha ballaaran ee DJ khibrad iyo muusikalayda.
العربية, English, Français, Español... DVDFab 9.3.1.9
Saxannada Software in aad hesho nuqul DVD aan khasaaro tayada. Sidoo kale software ka mid ah qalabka ku cadaadisaa, tirtirto iyo diinta ka kooban drives.
العربية, English, Українська, Français... Xvid 1.3.4